ပြည်တွင်းသတင်း Archives - Lupyo News
အသက်၁၃နှစ်နဲ့ ကိုယ်ဝန်(၅)လရှိခဲ့တဲ့ (၇)တန်းကျောင်းသူ မိန်းကလေးရဲ့ အဖြစ် မနေ့က ကျမဆေးခန်းကို ultrasound ကြည့်ဖို့သားအမိနှစ်ယောက်လာပါတယ် သူတို့သားအမိဝင်လာတုန်းကတော့..ရင်သားတဖက်မရှိ တဲ့ မိခင်ကို လှမ်းကြည့်ရင်း.လူနာလို့ထင်မိတာပါ။ နောက်တော့မှ..ကျမသမီးလေးရာသီ မလာတာ 3လလောက်ရှိပြီ..ဗိုက်မှာလည်း အလုံးပေါ်နေလို့ဆိုမှ ကလေးဗိုက်ကိုစပ်းသပ်ကြည့်လိုက်တော့..ဗိုက်ထဲမှာ ကိုယ်ဝန်က 5လပြည့်ခါနီးပါပြီ..း။ ကလေးရဲ့ အသက်ကိုသေချာသိချင် လို့မွေးနေ့မေးလိုက်မှ 13နှစ်နဲ့ တစ်လ..ဗိုက်ထဲက ကိုယ်ဝန်က 5လ.. .ရှင်းရှင်းပြောရရင်.အမွှေးတောင်သေချာမပေါက်သေးတဲ့ .မျက်နှာ အေးအေးလေးနဲ့ ကလေးကိုကြည့်ပြီး ကျမ ဘယ်ကနေ စပြောရမလည်းတောင်တွေးမရတော့ပါ မတတ်နိုင်အမေကိုရှင်းပြတော့ပြီး.သမီးရည်းစား ရှိသလားချော့မေးတော့..ရည်းစားတော့မရှိ… အပျိုမဟုတ်တဲ့ အဆောင်နေသူငယ်ချင်း ဆီကဘောင်းဘီယူဝတ်မိ သည်ဟုပြောသည်..လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ဘူး..အမှန်အတိုင်းပြောဖို့နည်းနည်းလေး မာန်လိုက်တော့..မှ.တတန်းထဲနေ.သူငယ်ချင်း နှင့်. .ဟုဝန်ခံလာလေသည်။ fbပေါ်မှာ ဟိုတလောကေ ခတ်စားနေတဲ့ရေကူးကန်ထဲကိုယ်ဝန်ခုနှစ်ယောက်ရတဲ့. မဟုတ်တဲ့ post ကို ဖတ်ပြီး..အမေကို..ဘောင်းဘီ ကိစ္စနှင့်ဖြီးတော့ အူကြောင်ကြောင်အမေက သို့လောသို့လော ဖြစ်သည်…။ … Read more
December 3, 2020 by Lupyo News
ငါးပိ မုန်းတဲ့ မင်းသမီးလေး သံသာမိုးသိမ့် တပ်ပိုင်မြေဖြစ် သွားပြီ ငါးပိကို မုန်းတော့ အစာစားရင်တောင် ဗိုလ်စာတွေပဲ ရွေးစားတာ ဆို့အောက် တာတောင် ဗိုလ်နဲ့မှ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လိုက်ပါတယ်လေ သိနေတာကကြာပါပြီ အတူတူ တွဲရိုက်ထားတဲ့ပုံ မရ​သေးလို့သာ ငြိမ်နေရတာ ၁၀၀%သေချာ စေတဲ့ ပုံလေးတွေထပ်ရမှ တင်ပေးမယ် သဘောတူရဲ့လား ယူမယ့်ကျားကျားကိုလည်း ငါးပိစား မစားအရင်မေးပီးမှ လက်ထပ်နော် Credit – Han Nyein Oo ============= Unicode ငါးပိ မုနျးတဲ့ မငျးသမီးလေး သံသာမိုးသိမျ့ တပျပိုငျမွဖွေဈ သှားပွီ ငါးပိကို မုနျးတော့ အစာစားရငျတောငျ ဗိုလျစာတှပေဲ ရှေးစားတာ ဆို့အောကျ တာတောငျ ဗိုလျနဲ့မှ ဘာပဲဖွဈဖွဈ လိုကျပါတယျလေ သိနတောကကွာပါပွီ အတူတူ … Read more
November 27, 2020 by Lupyo News
“ကားပေါ်မှ ပြုတ်ကျပြီး သတိလစ်နေစဉ် ပြန်တင်ခေါ် သွားခံရပြီး ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ မိန်းကလေး
November 24, 2020 by Lupyo News
“ကားပေါ်မှ ပြုတ်ကျပြီး သတိလစ်နေစဉ် ပြန်တင်ခေါ် သွားခံရပြီး ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ မိန်းကလေး 23ရက်ည ကိုးနာရီ ပတ်ဝန်းကျင်လောက်တွင် အင်းစိန် ဖော့ကန် မင်္ဂလာလမ်း မှဆိုင်သိမ်းပြီးပြန်လာသော ဇွန်ပန်းရုံဦ(ခ) ပြည့်ပြည့် သည်အင်းစိန်ပန်းခြံအနီးတွင်အောက်ဆိုက်ကား ပေါ်မှပြုတ်ကျပြီးမေ့လဲသွားသည်ဟုသိရှိရပြီး အနီးရှိမျက်မြင်များ၏ပြောပြချက်အရထိုကားမှပြန်ခေါ်သွားသည်ဟုသိရပါသည်။ CCTVတွင်လဲ မသဲကွဲ၍ ကားနံပါတ်လဲမရခဲ့ပါ။မိသားစုများမှအင်းစိန်ဆေးရုံတွင်သွားရောက်စုံစမ်းရာတွင်လဲ လဲမတွေ့ရှိခဲ့၍တွေ့ရှိခဲ့ပါက(သတင်းတစုံတရာသိရှိပါက) အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပေးကြပါခင်ဗျာ.. အင်းစိန်ရဲစခန်းတွင်လဲ FIR ဖွင့်ထားပါတယ်။ 0943204885 09254308382 09250494282 Heiko Takemo ================ Unicode 23ရကျည ကိုးနာရီ ပတျဝနျးကငျြလောကျတှငျ အငျးစိနျ ဖော့ကနျ မင်ျဂလာလမျး မှဆိုငျသိမျးပွီးပွနျလာသော ဇှနျပနျးရုံဦ(ခ) ပွညျ့ပွညျ့ သညျအငျးစိနျပနျးခွံအနီးတှငျအောကျဆိုကျကား ပျေါမှပွုတျကပြွီးမလေဲ့သှားသညျဟုသိရှိရပွီး အနီးရှိမကျြမွငျမြား၏ပွောပွခကျြအရထိုကားမှပွနျချေါသှားသညျဟုသိရပါသညျ။ CCTVတှငျလဲ မသဲကှဲ၍ ကားနံပါတျလဲမရခဲ့ပါ။မိသားစုမြားမှအငျးစိနျဆေးရုံတှငျသှားရောကျစုံစမျးရာတှငျလဲ လဲမတှရှေိ့ခဲ့၍တှရှေိ့ခဲ့ပါက(သတငျးတစုံတရာသိရှိပါက) အောကျပါဖုနျးနံပါတျမြားသို့ ဆကျသှယျအကွောငျးကွားပေးကွပါခငျဗြာ.. အငျးစိနျရဲစခနျးတှငျလဲ FIR … Read more
November 22, 2020 by Lupyo News
ပညာသင်နှစ် တစ်နှစ်အောက်မည် ဆိုသည်မှာ…. ပညာသင်နှစ် တစ်နှစ်အောက်မည် ဆိုသည်မှာ မဟုတ်ဘဲ ကိုဗစ်ကူးစက် အပေါ် မူတည်၍ ကျောင်းများ ပြန်ဖွင့်နိုင်ရန် စီစဉ် နေကြောင့် အခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကိုလေးဝင်းက ပြော ကြားသည်။ စာသင်ကျောင်းများပြန်ဖွင့်ရန် လောလောဆယ်တွင် အစီအစဉ်များကို ရေးဆွဲနေပြီး ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက အသိပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးကိုလေးဝင်းက ဆိုသည်။ “ဖွင့်နိုင် မဖွင့်နိုင်ဆိုတာ ချက်ချင်းကြီး ကောက်ပြောလို့ မရဘူးလေ။ ကိုဗစ်ကူးစက် မှုအပေါ် မူတည်တယ်။ အခု လောလော ဆယ်ကတော့ စောင့်ကြည့်ဆဲ ကာလလို့ပဲ ပြောလို့ရတယ်။ လောလောဆယ် အစီအစဉ် ဆွဲတာတွေတော့ လုပ်နေကြတယ်။အချိန် မှာတော့ မထုတ်ပြန်သေးဘူး။ ထုတ်ပြန်တဲ့ အချိန်အသိပေးလိုက်မယ်” ဟု ညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ် ဦးကိုလေးဝင်းက ပြောသည်။ စာသင်ကျောင်းများ … Read more
တစ်ရွာလုံး ပိုက်ဆံကိုင်ခွင့် မရသည့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ရွာလေး တစ်ရွာ အကြောင်း
December 15, 2020 November 22, 2020 by Lupyo News
တစ်ရွာလုံး ပိုက်ဆံကိုင်ခွင့် မရသည့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ရွာလေး တစ်ရွာ အကြောင်း တစ်ရွာလုံးပိုက်ဆံကိုင်ခွင့် မရသည့်တံငါရွာ ဒုံးဆွေသန်းကျေးရွာ လူတစ်ဦး၊ မိသားစုတစ်စုတွင်မက တစ်ရွာလုံး ပိုက်ဆံမရှိဘဲ ရပ်တည်နေထိုင်သည့် ရွာတစ်ရွာမှာ တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်းရှိနေသည်။ တနင်္သာရီတိုင်း မြိတ်ခရိုင် ကျွန်းစုမြို့နယ်အတွင်းရှိ ရေမြစ်ကြီးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ယင်းရွာရှိနေသည်။ အမည်က (ဒုံးဆွေသန်းကျေးရွာ) ဒုံးကျွန်းအုပ်စုအတွင်း ဒုံးပုလဲအော် ၊ ဒုံးညောင်မှိုင်း ၊ဒုံးဒဟွန်း စသည့်ကျေးရွာအမည်များရှိကြသည်ကို လူအများကသိကြသည်။ သို့သော်( ဒုံးဆွေသန်းကျေးရွာ) ဟု ရွာလေဆိပ်တွင်ဆိုင်းဘုတ်ကြီးတင်ထားသော်လည်း သူ့ရွာအမည်ကို လူအများသိပ်မကြားဖူးကြ။ သည်ရွာကို ဦးဆွေသန်းဆိုသူက လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်းလေးဆယ်ကျော်ကတည်းက တည်ထောင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် အိမ်ခြေတစ်ရာနီးပါးပင်ရှိလာနေပြီဖြစ်သည်။ ယင်းရွာတွင် လက်ရှိနေထိုင်နေကြသူ တခြားဒေသများမှ လာရောက်လုပ်ကိုင်ပြီး အခြားဒေသများမှလာရောက်လုပ်ကိုင်ပြီး အခြေချနေထိုင်သူများဖြစ်ကြသည်။သို့သော် ဦးဆွေသန်းမှာ ဆုံးပါးသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ၄င်းအစား သမီးဖြစ်သူက အဖေ၏ … Read more
နောက်ဆုံးပို့ဆောင်ဖို့ လာကြိုသည့်သူနှင့်အတူ..မိန်းကလေးတစ်ယောက်သေဆုံးသွားသည်… သူ … ဒါကို သတိထားမိတဲ့အချိန် သေမင်းဟုယူဆရသည့် ဝတ်ရုံနက်ခြုံထားသောလူကြီးက သူ့ဘေးရောက်နှင့်နေပြီ၊ လက်ထဲမှာလည်း တစ်ဖက်က သူကိုင်နေကျ တူရွှင်းအရှည်ကြီးနှင့် နောက်တစ်ဖက်မှာ လက်ဆွဲသေတ္တာလေးတစ်ခုနှင့် သေမင်းက …ထိုမိန်းကလေးကိုပြောသည်၊”လာ … ကလေးမလေး သွားဖို့အချိ်န်တန်ပြီ မိန်းကလေး “ဟင် … မြန်လိုက်တာ … သမီးမှာ လုပ်စရာ အစီအစဉ်တွေအများကြီးကျန်သေးတယ်၊ သေမင်း “တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ အချိန်မရှိတော့လို့ပါ … မိန်းကလေး “ဦးလက်ထဲက သေတ္တာထဲမှာ …ဘာတွေထည့်ထားတာလဲ?” သေမင်း “မင်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဥစ္စာတွေ” မိန်းကလေး “သမီးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဥစ္စာတွေ ဟုတ်လား ? ဦးဆိုလိုတာ သမီးရဲ့အဝတ်အစားတွေ၊ ရွှေတွေ ငွေတွေကိုလား …” သေမင်း “အဲဒီဥစ္စာတွေက မင်းနဲ့ အစကတည်းက … Read more
အသစ်ပြင်လိုက်တဲ့ စည်းမျဉ်း အသစ်တွေနဲ့ ကြည့်ကောင်းတော့မယ့် အုပ်ကြီး ရွေးချယ်ပွဲ အကြောင်းများ
November 19, 2020 by Lupyo News
အသစ်ပြင်လိုက်တဲ့ စည်းမျဉ်း အသစ်တွေနဲ့ ကြည့်ကောင်းတော့မယ့် အုပ်ကြီး ရွေးချယ်ပွဲ အကြောင်းများ အသစ်ပြင်လိုက်တဲ့ စည်းမျဉ်း အသစ်တွေနဲ့ ကြည့်ကောင်းတော့မယ့် ရပ်ကွက်အုပ်ကြီး ရွေးချယ်ပွဲများ ရပ်ကွက် ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးမှူးတွေ အသစ်ပြန်ရွေးကြတော့မယ်… သည်တခါတော့ ကိုယ်တိုင်မဲပေးကြပါ။ အရွေးမမှားကြပါနဲ့ ပြည်သူ့အ‌တွက် စေတနာနဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန် အလုပ်လုပ်သူတွေကို ဘဲရွေးကြပါ) အလွန်အရေးကြီးတဲ့ အရင်ဥပဒေနဲ့ ခုဥပဒေ ပြင်ဆင်ပြီး ကွာခြားချက်လေးကိုပြောပါမယ်။ (၁) ဆယ်အိမ်မှုးကို “တစ်အိမ်တစ်မဲ”စနစ်နဲ့ အရင်ရွေးရပါမယ်။ (၂) အဲဒီဆယ်အိမ်မှုးထဲက ရာအိမ်မှူးကို “တစ်အိမ်တစ်မဲ” နဲ့ ထပ်ရွေးရပါမယ်။ (၃) ရာအိမ်မှူးတစ်ဦး ထက်ပိုရင် ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ အတွင်းမှာရှိတဲ့ “တစ်အိမ်တစ်မဲ”နဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေး ကြရပါမယ်။ (အဓိကက မဲပေးရမယ့်အချိန်မှာ မိမိကိုယ်တိုင် ပါဝင်ကြဖို့ မမေ့ပါနဲ့) (Nyi Nyi … Read more
အအေးလှိုင်း ဖြစ်စဉ် တဖြည်းဖြည်း အားကောင်းလာ၊ ဆောင်းတွင်း အအေးပိုမည်
November 18, 2020 by Lupyo News
အအေးလှိုင်း ဖြစ်စဉ် တဖြည်းဖြည်း အားကောင်းလာ၊ ဆောင်းတွင်း အအေးပိုမည် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရဲ့ လေထုအညွန်းကိန်းနဲ့ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်က ပုံမှန်ထက်ကျော်လွန်ပြီး ပိုအေးလာလို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဆောင်းရာသီအတွင်း အအေးဓာတ် ပိုလာနိုင်တယ်လို့ မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေ သိရပါတယ်။ “လာနီညာရဲ့ သဘောသဘာဝက အေးမြပြီးတော့ စိုစွတ်တဲ့ သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်၊ အဲ့ဒီတော့ လာမယ့်ဆောင်းရာသီမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အအေးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိနိုင်တယ်။ တချို့ဒေသတွေမှာတော့ ပုံမှန်အပူချိန်လောက်မှာပဲရှိပြီး တချို့ဒေသတွေမှာတော့ ပုံမှန်ထက် ပိုအေးနိုင်တာလည်း ရှိပါတယ်။” လို့ မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာကျော်မိုးဦးက ပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လာနီညာဖြစ်စဉ်ကို ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ သြစတြေးလျနိုင်ငံတို့ပဲ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံက တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နိုင်တာမရှိတဲ့အတွက် ထူးထူးခြားခြားထိခိုက်နိုင်တာတော့ မရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အယ်နီညိုနဲ့ လာနီညာဖြစ်စဉ်တွေက စက်တင်ဘာလလောက်က စတင်ဖြစ်ပေါ်နေပြီး နိုဝင်ဘာလနဲ့ … Read more
အိမ်ရှေ့မှာ သတ္တာလေးတလုံးပေါ်မှာ ထိုင်နေလို့ အချိန်ကြာလာတော့ ဘာဖြစ်လို့လဲ ထွက်မေးကြည့်လိုက်​သော်အခါ
November 17, 2020 by Lupyo News
အိမ်ရှေ့မှာ သတ္တာလေးတလုံးပေါ်မှာ ထိုင်နေလို့ အချိန်ကြာလာတော့ ဘာဖြစ်လို့လဲ ထွက်မေးကြည့်လိုက်​သော်အခါ အိမ်ရှေ့မှာ သတ္တာလေးတလုံးပေါ်မှာ ထိုင်နေလို့ အချိန်ကြာလာတော့ ဘာဖြစ်လို့လဲ ထွက်မေးကြည့်တာ ကိုယ်တောင်ငိုချင်လာတယ် က​လေးဘဝထဲက ​ရွှေပေါက်ကံထဲက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သေးလေးတခုမှာ အလုပ်ဝင်လုပ်ခဲ့တာ ၁၀နှစ်နီးပါးရှိပြီတဲ့…. ဆိုင်တွေ ပုံမှန်ရောင်းရချိန်မှာ ညဉ့်နက်တဲ့အထိခိုင်းပြီး မနက်အစောကြီးထရတာမျိုး မငြီးမငြူလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့ ထမင်းစားရုံလေး ကျောခင်းတနေရာစာလေးနဲ့သာ ကျေနပ်ခဲ့ရတဲ့ စာမတတ် ပေမတတ် တောက ကလေးတွေကို သက်သက်သာသာဈေးနဲ့ ခိုင်းခဲ့ပြီး အခုလိုဆိုင်တွေပိတ်ထားရချိန်မှာတော့ တာဝန်မယူနိုင်ဘူးဆိုပြီး ပြောဆိုမောင်းထုတ်ပါတယ်တဲ့ လမ်းပေါ်ထွက်လာရပေမယ့် ပိုက်ဆံလည်း တပြားမှမပါ နေစရာ စားစရာလည်းမရှိမန်းလေးပြန်ချင်ပါတယ်ဆိုလို့ ကိုသန်းမင်းကြွယ်တို့ ပုလဲမီးသတ်တွေဆီ အကူအညီတောင်းခဲ့ပေမယ့် သူတို့လည်း လူပြည့်နေလို့ တာဝန်မယူနိုင်ပါဆိုလို့ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီလေးငှားပေးပြီး ရွှေပေါက်ကံ Q centre ကို အကူအညီတောင်းဖို့ ပို့ပေးလိုက်ပါတယ် ဆက်လက်ပြီးကူညီမယ့်သူပေါ်လာပါစေ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ငွေလေးနဲ့လည်း … Read more